Famolavolana tranonkala - Creativos Online | Creativos Online (Pejy 2)
Ho fanamarihana ny Andro manerantany amin'ny fahazoana miditra, Adobe dia nanavao ny Color, ny tranokalany natokana hamoronana paleta miloko.
Hatramin'ny 15 Jona dia manana maimaim-poana Adobe Spark ianao ary amin'izany miditra amin'ny fitaovana lehibe hamoronana sary.
Mila mitandrina tsara ianao rehefa manararaotra manararaotra areti-mandringana. McDonald's dia niaritra izany tamin'ny sakafon'izy ireo.
Miaraka amin'ireo rindranasa ireo ho an'ny litera ho an'ny Instagram dia hahafahanao manome fiainana hafa ny biônikan'ny kaontinao Instagram na ireo endritsoratra typografikan'ny Instagram Stories.
Ho an'ny mpamorona rehetra dia zava-dehibe ny fananana portfolio amin'ny Internet miaraka amin'ny asany izay ahafahan'ny mpanjifa mety mahita ny asantsika ...
Raha mitady mpamorona manome aingam-panahy anao ianao, ireto efatra ireto avy amin'ny Instagram, ary mikasika ireo sokajy samihafa, dia mendrika ho an'ireo fotoana main-tany ireo.
Tranonkala tsara kokoa hanatsarana ny fahaizanao mamorona sy hahazo aingam-panahy ilainao hahatonga ny volanao tsy manam-paharoa sy feno referansa.
Mandalina ny sasany amin'ireo tompo amin'ny famoronana pejin-kaonty sy marketing amin'ny mailaka mamaly izahay ary mifanaraka amin'izany amin'ny fitaovana rehetra.
Fantaro ny plugin tsara indrindra hametahana ireo lahatsoratry Wordpress anao ary omeo azy ireo fampiasa maro hafa. Hahazo pejy fidirana matihanina ianao
Ny famoronana pejy web misy interface azo idirana sy voalamina tsara dia ahafahan'ny mpampiasa manana fahasembanana mivezivezy mora foana.
Mba hahatratrarana endrika tsara dia mila manana referansa isika. Avelanay eto aminao ny kaonty Instagram 10 misy atiny tsara ho an'ny asanao manaraka.
Lalao mahaliana sy mahafinaritra antsoina hoe Can´t Unsee izay ahafahantsika manamarina ny haavon'ny fahalalantsika amin'ny famolavolana UX.
Azonao atao ny mamorona tranokala tsy misy lohateny misy ilay kinova vaovao 3.0 an'ny Kirby, CMS hafa azo soloina Wordpress toa toa tsara kokoa.
Nohavaozina ny studio mba hahafahanao manao prototypes tsara kokoa
Ny studio dia mamela anao hanangana prototype ireo tranonkalanao vaovao na fampiharana anao, ary koa mamoaka azy ireo avy hatrany. Vahaolana lehibe.
Azonao atao ny mamorona tranokala nefa tsy manana hevitra momba ny fandaharana, mandalo CMS miaraka amin'ny Wordpress miaraka amina vondron'olona marobe na atao an-tsokosoko.
Motion dia rindranasa tranonkala vaovao ahafahanao mamorona sarimiaina na sary mijirika geometrika avy amin'ny sary tokana. Vahaolana lehibe.
Ny doka Instagram dia mamela antsika hanao fanentanana amin'ny fomba tsotra sy tsy lafo. Lazainay aminao ny fototra hahafahanao manao ny doka voalohany mahomby.
Azonao atao ny manangona hatramin'ny 60% miaraka amin'ireo lohahevitra Wordpress feno fonosana mega miaraka amin'ny sokajy isan-karazany toy ny eCommerce, fampakaram-bady, trano fandraisam-bahiny ary maro hafa.
Na dia mieritreritra aza izahay indraindray fa tsy ampy izany, ny fampiasana Wordpress no safidy tsara indrindra, avy amin'ny Creativos Online dia fantatray izany ary manome anao antony 3 hampiasana azy izahay
Raha manana fifamoivoizana betsaka kokoa avy amin'ny telefaona finday ianao fa tsy avy amin'ny solosaina, ity andian-dahatsoratra CSS 9 ity dia ilaina mba hanombohana mieritreritra ny hanova ny tranokalanao.
Izahay dia mizara tabilao 19 ho an'ny React izay ahafahanao manome ireo toerana ireo hivezivezy eo amin'ny tranonkalanao. Anisan'ireo takelaka ireo koa ny karazana Design Material.
Ity andiana menus efijery feno ity dia saika vita amin'ny CSS avokoa. Azonao atao izao ny manavao ny tranonkalanao amin'ny menus mahafinaritra.
Ny fitomboan'ny fangatahana tranokala WordPress dia mitaky ny hanafahan'ny mpamorona ny tenany amin'ny asa miverimberina izay azo tsorina. Ho an'ity dia azonao atao ny mahazo lohahevitra WordPress izay manamora ny asa ity. Eto izahay dia nanangona maodely mamaly 10 maimaimpoana.
Mitombo hatrany ny sehatra famoronana votoaty WordPress ary mihamaro hatrany ny mpanjifa liana amin'ny fampiasana an'ity haino aman-jery ity hamoronana ny tranonkalany. Nanjary asa mahasoa tokoa ho an'ny mpamorona io ary izany no antony ampianaranay anao ny fampianarana tsara indrindra hifehezana azy.
Sneakers sy fiaraha-miasa matotra amin'ny sakafo ho an'ny 'sneaker' anao
Ny kapaoty sy ny sakafo dia fitambarana hafahafa ho an'iza na iza. Ny dokam-barotra amin'ny sakafo dia tsy manome laza be dia be, fa amin'ireto ohatra ireto dia hanova ny sainao ianao, farafahakeliny vetivety.
Sintomy ny iray amin'ireo lohahevitra 60 maimaim-poana Tumblr ary mamorona ny portfolio-nao na ovao ny modely misy anao. Misy lohahevitra mahavariana maro hanamboarana ny Tumblr
Eto ianao no ho voalohany hanandrana ny fisie youtube vaovao! Google dia nanolotra azy io ho fitsapana ary afaka mandroso ihany ianao manandrana azy.
Ny famolavolana sary amin'ny tranokala, fivarotana an-tserasera ary fampiharana finday dia tena manandanja ary tafiditra ao anatin'ny famolavolana sary ihany koa.
Ny plugins tsara indrindra tokony ho raisinao rehefa manangana tranokalanao na bilaoginao miaraka amin'ny Wordpress. Mahalalà azy ireo.
Ireo modely dia mitrosa amin'ny fanomezana ny tranokalanao na bilaogy endrika tsy manam-paharoa izay tonga lafatra amin'ny lohahevitra iray resahina ao amin'ny Wordpress.
Modely ho an'ny pejin-tranonkala Jimdo amin'ny vidiny tena mahaliana sy fivarotana matihanina sy maoderina, mamaly ary an-tserasera.
Tetikasa Adobe Labs vaovao dia tsy manandrana manampy antsika hanana famoronana ihany, fa manampy antsika hamorona atiny ho an'ny haino aman-jery marobe
Inona avy ireo singa mamaritra ny hetsiky ny Design Material? Inona no ifandraisany amin'ny Flat Design? Mamaky hatrany!
Inona no maha samy hafa ny pejy famolavolana adaptatera sy ny pejy famolavolana mamaly? Mamaky hatrany!
Mitady lohahevitra wordpress ho an'ny tetikasanao ve ianao? Mamaky hatrany!
Fironana 5 hafa amin'ny famolavolana tranonkala izay nanamarika tamin'ny 2015, ny tsara indrindra amin'ny famolavolana tranonkala tamin'ny 2015
Safidy malalaka bokotra tranonkala maherin'ny 50 tonga lafatra handrafetana ireo tetikasanao. Mamaky hatrany!
Fisafidianana plugins 7 tena mahaliana hiara-miasa amin'i Prestashop. Mamaky hatrany!
Safidy enina lehibe tsara hametrahana ny endrikao amin'ny Internet.
Lazainay anao ny lakile fototra ahafahana mampivelatra tetik'asa tranonkala mahomby
Fahadisoana 7 mahazatra indrindra tokony hialana amin'ny typography amin'ny tranonkala
Inona ireo lesoka mahazatra indrindra ary inona no tsy tokony hialantsika amin'ny tetik'asa web rehefa mifantoka amin'ny typography isika? Makà!
Fanangonana endritsoratra maherin'ny zato ho an'ny famolavolana tranonkala maimaim-poana. Mila loharanom-baovao vaovao hampandrosoana ny asanao ve ianao?
Boky fampianarana maimaim-poana ho an'ny Adobe Dreamweaver CS3, CS4, CS5, CS6 ary CC amin'ny teny Espaniôla
Ny fanangonana ireo boky torolàlana an'ny Adobe Dreamweaver amin'ny endriny rehetra sy amin'ny Espaniôla. Fampidinana maimaimpoana avy amin'ny 4shared.
Fonosana afisy efatra-polo sy dokam-barotra fanaovana dokam-barotra tonga lafatra ho an'ireo vao manomboka amin'ny tontolon'ny famolavolana sary. Maimaimpoana ary azo ovaina.
Tranokala 6 misy vokany Parallax
Ny vokan'ny Parallax dia fironana iray, ary izany no antony anateranay tranokala safidy 6 anao izay mampiseho izany amin'ny pejin'izy ireo. Te hahita azy ireo ve ianao? Ampidiro ary omeo ny hevitrao.
Ny zavatra sarotra indrindra rehefa manomboka miasa dia ny fanaovana teti-bola famoronana tranonkala. Amin'ity lahatsoratra ity dia hahita toro-hevitra, ohatra ary loharano hafa ianao.
Lafiny ara-dalàna amin'ny tranokala tokony ho fantatrao
Na mpamorona tranonkala ianao na raha manana ny pejinao manokana dia fantaro tsara ary arovy ny tranokalanao sy ny an'ny mpanjifanao amin'ny fahalalanao ny lafiny ara-dalàna amin'ny tranokala.
Bootstrap dia rafitra CSS izay nanjary nalaza be nanerana ny tranonkala. Ny endriny mamaly dia hitan'ny tambajotra sosialy Tuenti sy Twitter.
Fonosana firakotra 5 maimaimpoana ho an'ny volavolanao
Betsaka ny singa tafiditra amin'ny asa famolavolana sary, saingy tsy isalasalana fa ny firafitra no tsy hain'ny mpamorona raha tsy misy ary mazava ho azy fa manana toerana manokana ao anatin'ny fanangonana loharanon-karena sy fitaovana izy ireo.
Ny sora-baventy sy ny asany ao anatin'ny tranonkala
Ny sora-baventy dia dokam-barotra misy refy lehibe kokoa noho ny mahazatra izay manandrana misarika ny sain'ny olona miditra amin'ny pejin-tranonkala amin'ny alàlan'ny sary mihetsika na loko manaitra
Ny resume mifandraika mahatsikaiky indrindra hitanao
Mila milentika kely fotsiny manodidina ny harato vao mahita portfolio mamirapiratra. Robby's EL no resume mampifaly mahatsikaiky indrindra hitanao.
Modely mahafinaritra 5 After Effects ho an'ny Halloween
Amin'ity indray mitoraka ity izahay dia mitondra maodely After Effects 5 mahavariana ho an'ny Halloween izay azo ampiasaina ho intro video ho an'ny tranokala na tetikasa hafa.
Patternizer, ny mpamorona modely ho an'ny famolavolana tranonkala
Ny patternizer dia mpamorona lamina iray ahafahanao mamorona azy ireo amin'ny fahitana ary miaraka amin'izay dia fantaro ny kaody CSS ampiharina ao amin'ny tranonkalanao.
Ny sary ambadika ao amin'ny tranokala, efijery solosaina na telefaona, dia aseho ho singa manan-danja amin'ny fahitana amin'ny fiantraikany izay tianao hiteraka
Raha mamorona tranokala serivisy ianao ary mila latabatra vidiny, dia tokony hojerena ilay noforonin'i Benoît Philibert.
Sintomy ny Fira Sans, ny endritsoratra ao amin'ny Firefox OS
Raha miasa amina tetikasa ianao ary te hampiasa endritsoratra malalaka sy misokatra ao, dia jereo ny Fira Sans ho an'ny Firefox OS.
Pictaculous dia fitaovana kely an-tserasera izay ahafahantsika mamorona paleta miloko amin'ny sary. Tsotra be ny fampiasana azy.
Emulator finday, andramo ny tranokalanao amin'ny fitaovana finday samihafa
Ny emulator finday dia mamela antsika hahafantatra ny fijerin'ny tranokalanay amin'ireo fitaovana toa ny iPhone 5, ny Samsung GT i9100 na ny HTC Touch Diamon.
Maki, fonosana kisary tranonkala
Maki dia fonosana sary masina 93 ho an'ny sarintany an-tranonkala, ilaina amin'ny fanampiana marika famantarana toerana sy toerana mahaliana. Maimaimpoana tanteraka ary manana kalitao tena tsara.
Mampiditra fanangonana kisarisary minimalista monochrome maimaimpoana 1.262. Izy ireo dia toa tonga lafatra amin'ny famolavolana interface tsara.
Kitapo matevina vita amin'ny fingotra vita amin'ny CSS3
CSS3 dia mahagaga, ary raha te hampiseho azy dia mila mahita fotsiny ianao hoe ohatrinona ny zavatra mahavita azy. Azonao atao koa ny mamorona bokotra miloko.
iValentine, sary masina ho an'ny Andron'ny mpifankatia
iValentine dia fonosin'ireo sary masina tonga lafatra ampiasaina amin'ny tetikasa rehetra, antoko manokana na antoko fahatelo, amin'ny 14 Febroary, andron'ny mpifankatia.
Karatra Taom-baovao Animated
Fanangonana karatra mihetsika natao tamin'ny Flash hiarahabana ireo mpanjifa, mpitsidika, fianakaviana ary namana amin'ity faran'ny taona ity.
Fanangonana karatra krismasy mihetsiketsika sy am-boalohany vita amin'ny Flash izay afaka manondro sy manome aingam-panahy hamoronana ny antsika.
'Christmas Vector Christmas', sary masina krismasy
Kitapo kisary misy lohahevitra Krismasy, azo alaina amin'ny endrika PNG hatramin'ny 256x256 teboka. Fampidinana maimaimpoana sy maimaim-poana.
CSS3 Gradient Generator dia fitaovana an-tserasera mamela antsika hamorona gradien-loko CSS3 ho an'ny mpitety rehetra.
Tianay ny rehetra minimalist ary mazava ho azy fa ny famolavolana tranonkala an'ity fomba ity, na dia ekenay aza fa tena ...
31 Ohatra amin'ny fampiasana loko mainty amin'ny famolavolana tranonkala
Raha nanontany ahy momba ny fironana famolavolana ankehitriny ianao dia mazava fa hovaliko hoe ny loko maivana dia ...
Somary mihena ny tranokalan'ny orinasa ankehitriny satria vitsy ny orinasa nohariana, saingy mila ...
Ohatra 20 amin'ny tranokala fitafiana sy kojakoja
Ohatra 20 amin'ny tranonkala mifandraika amin'ny lohahevitry ny akanjo sy kojakoja
Ohatra amin'ny fivarotana an-tserasera natao ho azy
Ny famolavolana magazay an-tserasera dia fanatanjahan-tena lehibe amin'ny saina satria ankoatry ny fanaovana ny mahazatra dia mila misambotra ...
GoCart, E-Varotra mifototra amin'ny CodeIgniter
Ny vahaolana varotra elektronika dia mazàna mitaky fangatahana ary tsikelikely Codeigniter mametraka azy ho matanjaka ...
Ireo mpamorona ankehitriny tsara indrindra
ny mpamorona ankehitriny tsara indrindra
Tranonkala 25 hianarana taranja typography
Ny famolavolana taolam-paty dia lohahevitra nahasarika ny saiko hatrizay, ...
Isan'andro dia olona maro no manomboka orinasa amin'ny Internet, na amin'ny sehatra lehibe na amin'ny fanolorana tsotra fotsiny ...
Fandaharana azo entina 10 ho an'ny famolavolana tranonkala sy ny fampandrosoana
Tao amin'ny Devlounge dia nanao programa 10 azo entina handaminana sy hamolavolana tranonkala izy ireo. Azonao atao foana ny maka miaraka aminao ...
Portofolio 100 hanome aingam-panahy anao
Ao amin'ny Smashing Magazine izy ireo dia nanao compilations post roa niaraka tamin'ny portfolio tena tsara noforonina tamin'ny lafiny samihafa (mamorona, faly, vaovao, tsotra, ...
Modely 34 an'ny Tumblr
Tumblr dia rafitra fitorahana bilaogy mampivondrona bilaogy sy bilaogy bitika ao anaty iray, ary tato ho ato…
RSS Channel fantsona amin'ny bilaogy famolavolana 70 tsara indrindra amin'ny Espaniôla sy Anglisy
Ao amin'ny bilaogy Simple Things dia nahita loharano tena mahaliana aho, tsy borosy, tsy silhouette, na fomba, tsia ...
Kitapo fonosana sy fampirimana
Yourpackagingsource, dia iray amin'ireo pejy ahafahanao misintona modely fonosana ary koa fampirimana afaka manompo anao ...